မန်ယူနှင့်ပထမဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းဆင်းတဲ့နေ့မှာ ဒွိုက်ယော့ခ်နှင့်အတူမနေရန် ဖာဒီနန်ကို ဘာကြောင့် ဖာဂူဆန်ပြောခဲ့သလဲ? – Play Maker Sports Journal
မန်ယူနှင့်ပထမဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းဆင်းတဲ့နေ့မှာ ဒွိုက်ယော့ခ်နှင့်အတူမနေရန် ဖာဒီနန်ကို ဘာကြောင့် ဖာဂူဆန်ပြောခဲ့သလဲ?
August 20, 2021 playmaker Sports News 0
ဖာဒီနန်က “မင်းဒီမှာကြာကြာနေချင်လားလို့မေးပါတယ်။ကျွန်တော်ကလည်း ‘ဟုတ်ကဲ့၊ကျွန်တော်အောင်မြင်မှုအားလုံးရချင်တယ်၊ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်နိုင်သမျှလုပ်ချင်တယ်၊ဘော့စ်’လို့ပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမှာသူက ‘ပထမဆုံးလုပ်ရမယ့်အရာကတော့သူ(ယော့ခ်)နဲ့တွဲတွဲမနေဖို့ပဲ။သူကဒီမှာဆက်ရှိနေတော့မှာမဟုတ်ဘူး’လို့ပြောပါတယ်။ ‘ဘယ်လို’လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မိတယ်။အဲဒီမှာသူက ‘သူကမယုံနိုင်လောက်အောင်ကောင်းတယ်၊အောင်မြင်မှုအားလုံးရခဲ့တယ်၊ဒါပေမယ့်အခုတော့သူကကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော်တော်အထင်ကြီးနေပြီ’။သူပြောအဲဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီကလပ်မှာဘယ်သူမှမလုံခြုံဘူးဆိုတာသိလိုက်ရတယ်။မင်းဘယ်လောက်ပဲလုပ်ပြခဲ့လုပ်ပြခဲ့။ဒွိုက်ယော့ခ်ကမန်ချက်စတာဘုရင်လိုလမ်းလျှောက်နေတတ်တဲ့သူပါ။သူကဖလားသုံးလုံးရခဲ့တုန်းကအရေးပါတဲ့အစိတ်အပိုင်းလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်လေ။ဒါပေမယ့်ကိုယ်ရှိမယ့်အဆင့်ကနေလျှော့ကျလာပြီ၊လေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်မှာဟုတ်တိပတ်တိမလုပ်ပြလာနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ထိုးရပါမယ်။ဖာဂူဆန်ရဲ့အဲဒီစကားလုံးတွေကကျွန်တော့်ရဲ့မန်ယူကစားသမားဘဝတစ်လျှောက်လုံးလွှမ်းမိုးလာခဲ့ပါတယ်။အကောင်းဆုံးပုံစံစမပြနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်ကန်ထုတ်ခံရမှာကြောက်လန့်လာခဲ့ပါတယ်”လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
မန္ယူႏွင့္ပထမဆုံးေလ့က်င့္ခန္းဆင္းတဲ့ေန႔မွာ ဒြိဳက္ေယာ့ခ္ႏွင့္အတူမေနရန္ ဖာဒီနန္ကို ဘာေၾကာင့္ ဖာဂူဆန္ေျပာခဲ့သလဲ?
ဖာဒီနန္က “မင္းဒီမွာၾကာၾကာေနခ်င္လားလို႔ေမးပါတယ္။ကြၽန္ေတာ္ကလည္း ‘ဟုတ္ကဲ့၊ကြၽန္ေတာ္ေအာင္ျမင္မႈအားလုံးရခ်င္တယ္၊ၿပီးေတာ့ကြၽန္ေတာ္လုပ္ႏိုင္သမွ်လုပ္ခ်င္တယ္၊ေဘာ့စ္’လို႔ျပန္ေျဖခဲ့ပါတယ္။အဲဒီမွာသူက ‘ပထမဆုံးလုပ္ရမယ့္အရာကေတာ့သူ(ေယာ့ခ္)နဲ႔တြဲတြဲမေနဖို႔ပဲ။သူကဒီမွာဆက္ရွိေနေတာ့မွာမဟုတ္ဘူး’လို႔ေျပာပါတယ္။ ‘ဘယ္လို’လို႔ကြၽန္ေတာ္ေျပာလိုက္မိတယ္။အဲဒီမွာသူက ‘သူကမယုံႏိုင္ေလာက္ေအာင္ေကာင္းတယ္၊ေအာင္ျမင္မႈအားလုံးရခဲ့တယ္၊ဒါေပမယ့္အခုေတာ့သူကကိုယ့္ကိုယ္ကိုေတာ္ေတာ္အထင္ႀကီးေနၿပီ’။သူေျပာအဲဒီလိုေျပာလိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာဒီကလပ္မွာဘယ္သူမွမလုံၿခဳံဘူးဆိုတာသိလိုက္ရတယ္။မင္းဘယ္ေလာက္ပဲလုပ္ျပခဲ့လုပ္ျပခဲ့။ဒြိဳက္ေယာ့ခ္ကမန္ခ်က္စတာဘုရင္လိုလမ္းေလွ်ာက္ေနတတ္တဲ့သူပါ။သူကဖလားသုံးလုံးရခဲ့တုန္းကအေရးပါတဲ့အစိတ္အပိုင္းလည္းျဖစ္ခဲ့တယ္ေလ။ဒါေပမယ့္ကိုယ္ရွိမယ့္အဆင့္ကေနေလွ်ာ့က်လာၿပီ၊ေလ့က်င့္ခန္းအစီအစဥ္မွာဟုတ္တိပတ္တိမလုပ္ျပလာႏိုင္ေတာ့ဘူးဆိုရင္ေတာ့ထိုးရပါမယ္။ဖာဂူဆန္ရဲ႕အဲဒီစကားလုံးေတြကကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕မန္ယူကစားသမားဘဝတစ္ေလွ်ာက္လုံးလႊမ္းမိုးလာခဲ့ပါတယ္။အေကာင္းဆုံးပုံစံစမျပႏိုင္ေတာ့ဘူးဆိုရင္ကန္ထုတ္ခံရမွာေၾကာက္လန႔္လာခဲ့ပါတယ္”လို႔ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
အာဆင်နယ်စတားအချို့ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးရန် ငြင်းနေကြောင်း အာတီတာအတည်ပြု
အမေရိကန်ကယ်ဆယ်ရေးလေယာဉ်မှ ပြုတ်ကျသေဆုံးခဲ့သူများတွင် အာဖကန်လက်ရွေးစင်တစ်ဦးလည်းပါဝင်
Spotify စီအီးအိုမှာ အာဆင်နယ်ကို ဝယ်ယူလိုနေဆဲဖြစ်ကြောင်း ဂန္ထဝင်တိုက်စစ်မှူးဟင်နရီဖွင့်ဟ
မက်ဆီ၊ ဘက်ပေးနှင့်နေမာတို့ကို ဘယ်လိုတားရမလဲ မသိကြောင်း ဂွါဒီယိုလာဝန်ခံ
စပါးစ်နိုင်ပွဲအား ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားရသကဲ့သို့ အောင်ပွဲခံနေတယ်လို့ အာဆင်နယ် ဝေဖန်ခံရ
အနာဂတ်ကို စဉ်းစားနေပြီး ဇန်နဝါရီတွင် ထွက်ခွာဖို့ ရှိနေတဲ့ မန်ယူစတား